Izesekeli Nabakhiqizi Bemishini Esizayo | Izesekeli zeChina kanye neMishini Yokusiza Imishini & Abahlinzeki
Lo mugqa wokugcoba ubhiya usetshenziselwa ukugcwalisa ubhiya emathini, i-rinser, i-filler kanye ne-seamer yiyunithi ehlukanisiwe. Ingayiqeda yonke inqubo efana nokuwasha, ukugcwalisa nokubekwa uphawu.
Ama-Steam Generators awumthombo ophelele we-steam ephezulu egcwele ama-micro-breweries, ama-brewpub nezinhlelo ezincane zokuphuza umusi.
Uhlelo Lokugaya Malt
Uhlelo lokucubungula imithombo lubandakanya imishini kanye neminye imishini edingekayo ukulungisa okusanhlamvu kwemithombo ngaphambi kokuqala ukukhiqizwa kwe-wort endlini yokuphekela.
Uhlelo lwe-Hop Gun
“I-dry hopping”, ebizwa nangokuthi "i-cold-hopping" ebhizinisini, inqubo lapho kukhishwa khona amafutha abalulekile ayigugu ku-lupulin equkethwe amahops kubhiya. Ukweqa okomile kwenziwa ngemuva kwenqubo yokuphisa endaweni ebandayo. Ngalesi sikhathi ngokuhamba kwesikhathi, ubhiya usuqediwe kodwa awukakhuli ngokugcwele.